နေအိမ် - ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုနံရံကပ်စက်ရုံ
အပြင်ဘက်ဗွီဒီယိုနှစ်ဘက်ခြမ်း Front Service LED screeen Display2P5 P6 P8 P10 နှစ်ဖက် / LED ဆိုင်းဘုတ်/LED ဆိုင်းဘုတ်များ
ကြော်ငြာများအတွက် Front ဖွင့်သံရေစိုခံဗီဒို SMD Full Color P2.5 Outdoor LED Display Screen
Conference HD ကိုအရောင်အပြည့်အစုံ 16:9 တီဗီဖန်သားပြင်ဘုတ်တစ်ခုလုံးတွင်ရွေ့လျားနေသောမိုးလုံလေလုံမြင်ကွင်း
အတွင်းပိုင်း p2 ပျော့ပျောင်းသော module တစ်ခုကွေးဆလင်ဒါကော်လံများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဦး ဆောင် display ကိုမျက်နှာပြင်ကွေး
မြင့်မားသောတောက်ပသောအပြင်ဘက်ရေစိုခံ P5 သည်ပုံသေတပ်ဆင်ထားသောနံရံ
3D DJ Console မိုးလုံလေလုံတီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည့်ဗီဒီယို Display LED Screen
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထိပ်ဆုံးမှ ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံကပ်ထုတ်လုပ်သူများ, ဗီဒီယိုပြသခြင်းအတွက်ငှားရမ်းသည့်စင်မြင့် ဦး ဆောင်သောမျက်နှာပြင်များနှင့်ပုံသေကြော်ငြာထားသော ဦး ဆောင်ဖန်သားပြင်နှစ်ခုလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်.
ကျနော်တို့က ဦး ဆောင် display ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါးလွှာသော ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင် panel ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်, ၎င်းသည် P0.9mm HD သေးငယ်သည့် pixel pitch led display ဖြစ်သည်,သောအဓိကအောင်မြင်မှုများဖြစ်ပါတယ် .
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့် SMD စက်များကိုအသုံးပြုသည်, စုစုပေါင်းအရေအတွက်နှင့်အတူ 18pcs ထက်ကျော်လွန်.
ကျနော်တို့ထက်ပိုပြီးစီးပါပြီ 8000 ကမ္ဘာတဝှမ်းစီမံကိန်းများ, from rental stage displays to outside fixed advertising video walls.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေသည်, ကျနော်တို့ထက်ပိုဖို့ ဦး ဆောင် display ကိုဗီဒီယိုနံရံများတင်ပို့ခဲ့ကြသည် 100 တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ.
ကျနော်တို့ထက်ပိုရှိသည် 300 အလုပ်သမားများ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များသို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဝေရန်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူ
ဒါကြောင့် LED display ကိုစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်, အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်း, ငါတို့အသင့်ရှိနေပြီ
အားကစားပွဲအတွက်သင့်တော်တဲ့ LED display screen ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် အားကစားပွဲအတွက်သင့်တော်တဲ့ LED display screen ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ
LED display ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ? မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED display ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ?
အရောင်အပြည့် LED display သည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုမည်သို့ဖြစ်လာစေမည်နည်း? မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် အရောင်အပြည့် LED display သည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုမည်သို့ဖြစ်လာစေမည်နည်း?